ट्रेड युनियन हटाएकै जाती- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
ट्रेड युनियन हटाएकै जाती
समयअनुसार चल्नुपर्छ  । नेताले जनचाहना बुझ्न सकेनन् भने त्यसले राजनीतिमा असर पार्छ  ।
पछिल्लो समय ट्रेड युनियनकै कारण कतिपय उद्योग, कलकारखाना बन्द भएका छन् । ट्रेड युनियनका चाहिँदा/नचाहिँदा मागका कारण उद्योगहरू बन्द भए । त्यसबाट घाटा कसलाई भयो ? साहुलाई त पक्कै भएन । साहुले त काम चालु गर्न सकिएन भन्यो, आफ्नो सामान बेच्यो, हिँड्यो । त्यसले समस्या कसलाई पर्‍यो ? उद्योगमा मजदुरी गरेर खानेको रोजीरोटी खोसियो । निजामती कर्मचारी पनि ट्रेड युनियनका नेता भएका छन् । ट्रेड युनियनकै कारण सरकारी कार्यालयमा छिटो–छरितो काम हुन सकेका छैनन् । युनियनकै कारण कर्मचारीलाई जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा पनि कारबाहीमा पर्छु कि भन्ने डर भएन । डर नभएका कारण कर्मचारीहरू कामभन्दा पनि गफ चुटेर तलबभत्ता लिइरहेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाएकै राम्रो । १ सय २२ राजनीतिक दल छन् । हरेक दलले आफ्नो ट्रेड युनियन खोल्ने हो भने के होला, सोचौँ त । अहिले कतिपय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूमा ट्रेड युनियन खोलिएका छन् । ट्रेड युनियनको सदस्य भएपछि कर्मचारी स्वतन्त्र हुन्छ । अझ ट्रेड युनियनको कार्यसमितिभित्रै पर्ने कर्मचारीले त काम गर्न पनि पर्दैन । बसी–बसी तलबभत्ता बुझ्न पाएकै छन् । हाकिमसँग कुरा मिलेन भने कर्मचारीहरू कार्यालयमा तालाबन्दी गर्छन्, यो जति विकृति के होला ? राजनीति गर्ने इच्छा भए खुला राजनीतिमा आए भइगयो नि । किन ट्रेड युनियनका नाउँमा आम सर्वसाधारणका सेवामा दक्खल दिने ? सरकारी तबलभत्ता लिएर जनतालाई सेवा नदिने हो भने तिनलाई किन पाल्ने ? सरकारी तलबभत्ता लिने अनि ट्रेड युनियनका नाउँमा राजनीति गर्ने ? यो लज्जास्पद हो । कतिपय पुरस्कार, सम्मान, दण्ड–सजाय ट्रेड युनियनको हस्तक्षेपका कारण प्र्रभावित भएका छन् । विभिन्न जातीय युनियन पनि खुलेका छन् । यो राज्यका लागि चुनौती हो । राजनीतिक दलहरूले देशलाई माया गर्ने हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्न गाह्रो होइन, दलहरूको इच्छाशक्ति दरो चाहियो ।
–पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ११:१७
बिहीबार प्रकाशित शैलेन्द्रप्रसाद साहको ‘बहसमा प्रदेश नाम’ र उनले सुझाएको राजधानीको नामसित म सहमत छु  । नेकपा पहिले केवल राजमार्ग छेउछाउको दल मानिन्थ्यो  ।
यसअघि सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा नेकपाले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको छ । राजमार्गसँग उसको मोह ठिकै होला तर मधेसमा त्यो चल्दैन । अब उसले महेन्द्रीय विचारधारा छाड्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ नेपालको निर्माण तथा मधेस उत्थानमा लाग्नुपर्छ । नलागे एक खर्बको सट्टा बढी खर्बको चामल निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । राजधानी जनकपुर नै हुनुपर्छ । वीरगन्ज त मुलुकभरिको आर्थिक राजधानी छँदै छ । प्रदेशको नाम राख्नेबारे भने म लेखकको विचारसँग सहमत छैन । मिथिला शब्द वैदिक हो र त्यसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन तर मधेस शब्द मेटाउन सबै लागेका छन् किनभने यही नामले आन्दोलन भएको थियो । यस नामसँग पहाडी राजनीतिज्ञहरूलाई रिस छ र सुन्न पनि चाहँदैनन् । प्रदेशको नाम मध्यमधेस नै उपयुक्त हुन्छ ।